HITA FATY NIHOSIN-DRA
Vehivavy iray no hita faty ary feno ra tetsy Tsarasaotra-Alarobia. Novonoina izy ary natsipy teo an-toerana raha araka ny tombana voalohany. Mangana ny lohany ary feno ra nivoaka teo amin’ny vavany. Efa nandalo teny amin’ny tranom-paty ny fianakaviany nijery ny razana ary naka izany tao an-toerana rehefa vita ny fitsirihana nataon’ny manampahaizana mba hahafahana manokatra fanadihadiana avy hatrany.
MPAMPIHOROHORO TENY AMBOHIMANGAKELY
Sarona ihany ilay mpampihorohoro teny amin’ny faritra Ambohimangakely. Rangahy efapolo taona izy io ary tompon’antoka tamin’ny fanaparitahana trakta sy tsaho mba entina hanakorontanana ny sain’ny olona. Ny tena tanjona dia ny hialan’ny mponina ao amin’ny tanàna mba hanavotana ny ainy ary dia afaka manaram-po izany ireo jiolahy amin’ny fandrobana isan-karazany. Saika nahomby izany raha tsy nisy ny fandraisana andraikitra matomatotra kokoa nataon’ny zandary. Niainga tany am-piangonana no tena nahazoana ny vaovao momba ilay jiolahy.
Voasongon’i Dada indray Rajoelina tamin’ny fangalana ny fon’ny mpitia baolina kitra. Fisehosehoana be no natao tamin’ny fanomezana fanampiana ny ekipam-pirenena Barea ary ny an-dRajoelina irery no nahitahita be izany. Indrisy anefa fa vetivety dia lasa nisy nampifandray ny tsy fahombiazan’ny Barea sy ny fanomezan’ny kandidà fanampiana. Nolazain’ny olona fa lasa fitadiavam-bola no nitranga ary koa tsy mendrika ny hidiran’ny kilalao politika ny fanatanjahantena satria lasa tsy mampitombina ny sain’ny mpilalao. Misy lesona tokony hotsoahina ihany.
BE MPIJERY INDRINDRA
Nandritra ny lalao baolina kitra omaly alahady no tena nahitana mpijery betsaka indrindra teny amin’ny kianjan’ny CNaPS teny Vontovorona, miandahy miambavy, nisy fianakaviana iray manontolo mihitsy. Maro ireo avy any amin’ny faritany tonga teto Antananarivo mba hijery sy hankahery ny Barea.
Andrasan’ny maro anio araka ny fotoana nomen’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny hiasan’ireo kamio lehibe vaovao handroaka ny fako manerana ireo boriborintany enina, taorian’ny fanamboarana teknika tsy maintsy natao tamin’izy ireo.
Taorian’ny Sprinter dia ny moto no anisan’ny miteraka loza betsaka indrindra sy mandratra ary mamono olona mihitsy eto Antananarivo sy ny manodidina tato anatin’ny volana vitsivitsy izao.
Efa tena samy manao izay tiany ny rehetra amin’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ireo faritra manodidina azy. An-kavitsiana sisa mba tsy hitenenana hoe tsy misy ireo manaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana fa dia efa ny an-kisisika no fomba fanao. Matetika no mitazam-potsiny fa tsy mahavita mandamina intsony ireo mpitandro ny filaminana.